आमा छोरा का’ण्डको बारेमा अलौकिक माताको डरलाग्दो खुलाशा, दीइन यस्तो चुनौती, बच्चा कस्को ? Surkhet | Public 24Khabar
Home News आमा छोरा का’ण्डको बारेमा अलौकिक माताको डरलाग्दो खुलाशा, दीइन यस्तो चुनौती, बच्चा...
आमा छोरा का’ण्डको बारेमा अलौकिक माताको डरलाग्दो खुलाशा, दीइन यस्तो चुनौती, बच्चा कस्को ? Surkhet
पहाडतिरको कच्ची सकडमा एक सरकारी गाडी गुडिरहेको हुन्छ । चालक एक्कासी गाडी बाहिर निस्कन्छन् । तर गाडी गुडिरहन्छ । चालक गुडिरहेको गाडीको अगाडि बोनमा चढ्न खोजिरहेका हुन्छन् । गाडी सडकको डिलतिर गइसकेपछि उनी भित्र पस्छन् र आफ्नो सिटमा बसेर नियन्त्रणमा लिन्छन् । अगाडि कसैले भिडियो खिचिरहेको हुन्छ ।
ती चालकसँग सोधपुछ गर्दा आफूले गाडीमा टिकटक बनाएको र अबदेखि यस्तो गल्ती नगर्ने भनी माफी मागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले बताए । ‘मैले भिडियो हेरेपछि ड्राइभरलाई बोलाएर सम्झाएको छु । अब आइन्दा यस्तो गर्दिन भन्ने कुरा गर्नुभयो ।’ अध्यक्ष चौलागाईले भने–‘चालक स्थानीय भएकाले एकै गल्तीमा जागिरबाट हटाउनु भएन् ।’
गल्ती यस्ता गल्ती दोहोर्‍याए कारबाही गर्ने उनले बताए ।
Previous articleभर्खरै बाहिरियो आमा छोराको कल डिटेल हेर्नुहोस ! किन आमाले यस्तो सम्म गरिन्?
Next articleविश्वमा हलचल: पृथ्वीमा ठोक्कियो भया’नक तरंग, ७ अर्ब वर्षपछि ड’रलाग्दो घ’टना !Earth